bọọdụ akpaaka ije, nke a makwaara dị ka mgbasa ozi bọọdụ mmadụ, bụ ụzọ mgbasa ozi kachasị dị ọnụ ahịa yana ọnụ ahịa. Isi ihe bụ na a na-ebipụta eserese na vinyl nke mado na bọọdụ ụfụfụ, ọ bụghị akwa. Ọ dị mfe imepụta ma ọ bụ dochie ya na ọnụ ala dị ala.
Akpa mgbasa ozi a enweghị aka, dị fechaa na obere ibu, a na-ebuli bọọdụ 59x42cm n'elu isi, gosipụta akwụkwọ mmado na-agbanwe n'ihu na azụ, hụ na onye ọ bụla nwere ike lelee ozi gị dị iche, ọ dị mma maka nkwalite obere oge.
Igwefoto azụ 3D-ụfụfụ dị arọ kpụrụ akpụ nwere ihe nrụnye na imewe ọwa ikuku, a na-emegharị eriri eriri, ndị a na-eme ka onye nwe ya nwee ahụ iru ala; nwere akpa n'akụkụ na azụ azụ maka ijide ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ akwụkwọ ozi ahịa, na-ahapụ onye na-eyi ya aka n'efu.
Ogwe aluminom dị arọ na nke siri ike dị ka nhazi, ogologo ogwe osisi dị ka akpa azu, juru n'ime otu katọn.
Enwere ike iwepụ ma ọ bụ dochie eserese n'ụzọ dị mfe, nha mbipụta: H59 x W42cm dị ka atụpụtara.
Ngosipụta akpa akwụkwọ akụkọ mmadụ a bụ ngwa ahịa dị irè iji nweta akara n'ezie n'ụzọ dị ọnụ ala.
(1) Ogwe azụ 3D-ụfụfụ dị arọ kpụrụ akpụ nwere ihe nkuchi ma kwe ka imepụta ọwa ikuku na-eruba, na-enye ahụ iru ala site na iji ahụmịhe.
(2) Oghere zipa na akpa ndị ọzọ na-enye ohere maka ịtọhapụ aka gị n'efu.
(3) eriri na-agbanwe agbanwe na-egbochi akpa azu ka ọ dabere azụ na ifufe siri ike.
(4) Nko imewe na eriri maka karama mmiri
(5) Ihe Oxford na-eme ka akpa azu sie ike ma na-adịgide adịgide ruo ogologo oge.
BIIDKT 59*42cm * 2pcs 1.2KG 54*30.5*5.5CM
Nke gara aga: Ọnụ ụzọ mgbanaka ime ụlọ
Osote: Mmefu ego akpa azụ
Ọkọlọtọ ọkọlọtọ akpa azụ
ọkọlọtọ ọkọlọtọ Mochila
Ọkọlọtọ akpa akwa anya mmiri
Akpa akpa mgbasa ozi ije ije
ọkọlọtọ X akpa akpa